Midowga musharaxiinta oo guddoomiyaha baarlamaanka la kulmay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Midowga musharaxiinta oo guddoomiyaha baarlamaanka la kulmay
Midowga musharaxiinta oo guddoomiyaha baarlamaanka la kulmay
Xubnaha Midowga Musharixiinta u taagan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaay xalay kulan gaar ah la qaateen Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Fedraalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh cabdiraxmaan, iyagoo kala hadlay arrimo dhowr ah oo xaalada dalku ka mid tahay.
Kulanka ayaa ujeedkiisu waxaa uu ahaa sida laga yeelayoMarxalada dalka iyo Arrimaha doorashooyinka madaama uu dhamaaday mudada xilehynta Madaxweynaha Jamhuuriyada Fedraalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si dalka uusan uga dhicin firaaq Dastuuri ah.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya kulankaas, waxayna wararka la helay ay sheegayaan in midowga musharixiinta, ay u sheegeen, gudoomiyaha Golaha Shacabka, in xilka Madaxweynanimada ay ka idlaatay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidaas darteedna uu qaato doorkiisa oo uu noqdo Kusime, balse dalabkaas uu ku gacan seeyray Gudoomiye Mursal sida ay wararku sheegayaan.
Midowga Musharixiinta ayaan faah faahin ka bixin kualnkii ay la qaateen Guddoomiyaha Golaha Shacabka, balse taas bedelkeda ay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in Maxamed Cabdullaahi farmaajo xilligaan wixii ka dabeeya aysan u aqoonsaneyn Madaxweyne.
War-Murtiyeed ay kasoo saareen xaaladda dalka ayay ku sheegeen in laga bilaabo 8 Feb.2021 aysan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u aqoonsaneyn in uu yahay Madaxweynaha JFS.
Qoraal kasoo Golaha Midowga Musharixiinta ayay ku soo jeediyeen in la dhiso Gole Qaran oo ku meel gaar ah ( Tansinational National Council) oo ay xubno ka yihiin guddoomiyeyaasha labada aqal ee Baarlamaanka, Madaxweyneyaasha Maamul Goboleedyada, wakiilo ka socda Midowga Murashaxiinta iyo bulshada rayidka ah, si loo dhamaystiro hirgelinta heshiiskii 17 ka Sebtembar ee Sanadkii Hore.
Sidoo kale Midowga Musharixiinta waxay sheegeen inay waajib tahay in dalka laga badbaadiyo inuu dhaco firaaq Dastuuri ah sida ku cad qoodobka 95aad ee dastuurka KMG Soomaaliya, kaasoo qeexaya bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha iyo sii heynta xilkiisa ilaa iyo inta laga dooranayo Madaxweyne Cusub.
Waxay ugu baqeen Madaxweynaha inuu u hoggaansamo sharciga iyo dastuurka si uusan u lumin xaqa dastuuriga ah ee uu leeyahay taasoo shardiga ku xiran uu yahay inuu xilka si nabad ah ku wareejiyo.
Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqeen hay’adaah Amniga dowladda Federaalka inay ilaliyaan sharciga, iyagoo uga digay inay kasii amar qaataan shaqsiyaad ay mudada xilheyntoodu dhamaatay, waxayna ka dalbadeen Shacabka Soomaaliyeed & Beesha Caalamka inay taageeraan dalabka Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ka soo baxay.
Qoraalkan kasoo baxay Golaha Midowga Musharixiinta ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli muddo xileedka Madaxweynaha Soomaaliya ay ku egyahay Maanta, isla markaana weli wax heshiis ah aan laga gaarin arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
Previous articleDHAGEYSO:Ururka KUPPET oo doonaya in baarlamaanka uu dhaqaale dheeraad ah u qoondeeyo
Next articleDHAGEYSO:Maamulka gobolka Nugaal oo ka hadlay amaanka deegaanadaasi
Caalamka starfm - September 24, 2021 0